I-Simona -Yenzela uThixo igumbi-ukubala ubukumkani
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona NgoJanuwari 26th, 2021:
Ndabona uMama: wayenxibe ezimhlophe zonke, entloko kukho isigqubuthelo esimhlophe esimhlophe nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini, emagxeni akhe ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka esihla iinyawo zakhe ezazize ze zibekwe emhlabeni. Umama wayevule iingalo zakhe ebonisa ukuba wamkelekile kwaye kwisandla sakhe sasekunene wayenerosari ende engcwele, emhlophe ngokukhanya. Makabongwe uYesu Kristu.
Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ngokuba nisabele kule kholi yam. Bantwana, sekukudala ndifikile phakathi kwenu, kodwa uninzi lwenu alundiphulaphuli kwaye anizityhili eNkosini iintliziyo zenu. Bantwana bam, iNkosi inentliziyo ebanzi kwaye kukho indawo elowo nalowo kuni; Kufuneka uyifunayo kuphela, kufuneka ube yinxalenye yentliziyo kaThixo uze umenzele indawo kweyakho. Bantwana, iNkosi uThixo inithanda ngothando olungapheliyo; Ucela uthando, Ucela ukungena ukuze ube yinxalenye yobomi bakho; Akakunyanzeli ukuba umthande, kodwa ucela uthando kuwe, ucela ukuba umthande. Bantwana bam, vulani iintliziyo zenu eNkosini, mayivumele ingene kuni ukuze inigcwalise ngothando.
Bantwana, iNkosi ingumpeyinti omangalisayo, kwaye ngamnye kuni unikelile umfanekiso, indlela, kodwa nihlala niwungcolisa lo mfanekiso, bantwana bam, niyadaka loo ndlela ngezono zenu, neentsilelo zenu. Kodwa musani ukoyika, bantwana bam: ngesivumo esihle esicocekileyo nesipolishayo, njengokusula ngesiponji, ukupeyinta kwakho kungaphinda kukhanye. Hamba ngomendo wobomi bakho kunye neNkosi: umenze abekho ebomini bakho.
Bantwana bam abathandekayo, ndisanicela umthandazo omninzi, ngakumbi iCawe yam endiyithandayo kwaye nangaphezulu kwayo yonke iCawa yasekuhlaleni. Thandazani, bantwana, thandazani. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
← Angela - Nceda undimamele
Eduardo-Xolelanisa Nawe… →